Orina sy fantsom-pantsaka fantsom-pako - Sina mpanamboatra andiana fantsom-pivoarana any Shina, mpamatsy
Ny fantsom-by vy manamafy polyethylene (HDPE) fantsom-boaloboka matevina dia karazana fantsom-pandrefesana misy rindrina miaraka amina HDPE sy fitambaran-kasety vy. Ny firafitry ny rindrina dia misy sosona telo: ny sosona anatiny dia fantsom-bokatra anaty rindrina mitohy ary ny fantsona anatiny kosa dia maratra sy miharo ivelany. Ny fehikibo vy dia aforitra amin'ny fanamafisana ny vy miendrika vy, ary ny fanamafisana ny fantsom-boaloboka vita amin'ny vy dia mitambatra amin'ny sosona ivelany mitovy amin'ny HDPE amin'ny ...
HDPE miolakolaka fanamafisana rafitra rindrina karazana B fantsona dia antsoina koa hoe HDPE paompy mihodina paompy rindrina, fantsona carat, fantsom-panafahana karazana HDPE, fantsom-piolahana polyethylene avo lenta, karazana paipa rindrina B. Izy io dia karazana fantsom-pifanentanana vaovao misy lanjany maivana, tanjaka avo, rindrina anatiny milamina, fanoherana ny harafesina, fanoherana ny fahanterana, fanoherana, fanamafisana ny tsindry, fanoherana ny fiantraikany mahery vaika, fahalemena ary fiarovana. Avo ny kalitaon'ny las, mifandray ny vatana, ny qua ...
Ny fantsona manokana novokarina avy amin'ny fitaovana polyethylene avo lenta miaraka amin'ny rindrina malefaka ao anatiny, ny rindrina mihisatra ary ny toerana malalaka misy eo anelanelan'ny rindrina anatiny sy ivelany dia ampiasaina indrindra amin'ny rafi-pako milevina sy ny lalan-drano. mandritra ny famokarana. Ny rindrin'ny fantsom-pandrefesana indroa dia henjana ihany. Mampiasa fifandraisana malefaka amin'ny tombo-kase vita amin'ny kofehy voajanahary izy io, izay mora apetraka, mifandray tsara, tsy mora mivoaka, ary tsy mahatakatra kely ...
Ny akora ilaina amin'ny famokarana an'ity vokatra ity dia novaina fitaovana PP: ny rindrina anatiny malama sy ny rindrina ivelany dia mampiseho riaka anular tsy manam-paharoa, ary poakaty ny rindrina anatiny sy ivelany. Fanoherana simika sy fanoherana ny harafesina: fanoherana ny hakamoan'ny haino aman-jery simika isan-karazany toy ny asidra, alkaly, sira, sns. Izy io dia fitaovana fanoherana ny harafesina ary tsy ho voarebirebin'ny zavatra simba amin'ny tany. Fiatrehana ny vokatra: ny rindrina fantsom-pandrika dia mandray rafitra miavaka, impac ...